Marwadda Koowaad oo abaal marin gudoon siisay Marwo Shukri Bandarre | Somaliland.Org
Xafladaasi oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxa kale oo ka qayb-galay Guddoomiyaha Golaha Wakiilada , Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka, Wasiiro ka tirsan xukuumadda, masuuliyiin ka socotay Xisbiyada qaranka gaar ahaana xisbiga UDUB, ha’yadaha caalamiga ah ee ka hawlgala Somaliland iyo martisharaf kale.
Ugu horyn waxa xafladaasi hadal ka soo jeediyey guddoomiyaha golaha wakiilada Somliland Mudane C/raxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa si ayaa Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare ku hambalyeeyey abaal-marinta Caalamiga ah ee ay ku guulaysatay isagoo ku tilmaamay in abaal-marinta la ay tahay Mid sharaf weyn ugu fadhida shacabka Somaliland.
Agaasimaha hay’adda Candle Ligth Axmed Ibraahim Cawaale ayaa isna si mug leh ugu waramay Maraaxilkii ay soo martay Ha’yadda Candle Light iyo kaalinta ay kaga jirto Shukri hay’ad ahaan isaga oo sheegay inay tahay Deegaan Jire wakhti badan u hurtay ilaalinta dhirta iyo bay’ada Deegaanka dabiiciga ah ee Somaliland.
Marwo Edna Adan Ismaaciil ayaa waxa ay sheegtay in abaal-marinta la siiyey Shugri ay tahay mid ay ku mutaysatay Dadaalkii dheeraa ee ay u soo gashay wax u qabashada dadka jilicsan iyo dhawrista deegaanka.
Drs Edna Aadan Ismaaciil waxay intaas ku dartay in haweenka Somaliland laga dhex heli karo dumar aqoon iyo karti u leh bulshadooda .
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta iyo Wacyi-galinta Somaliland Mudane Cabdi Yuusuf Ducaale(Boobe) ayaa waxa uu sheegay in Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare ay Makhraati u tahay heerka ay taagan yihiin haweenka Somaliland iyo doorkii Shariifka ahaa ee ay ka soo qaadatay dib u dhiska, Nabadaynta iyo u bislaynta ummada ee nidaamka dimuquraadiyada Somaliland maadama ay xubin firfircoon ka ahayd sida uu xusay Komiishankii u horeeyay ee Somaliland ka hirgaliyay sadex doorasho oo si hufan u dhacay.
Wasiirka Warfaafintu waxa uu intaas ku daray in Marwo Shugri Xaaji Baandare ay tahay Shakhsiyad ku adag Qaranimada iyo jiritaanka somaliland.
Wasiirk Gaashaan-dhiga Somaliland Mudane Axmed Xaji Cali Cadami oo ay ka soo wada shaqeeyeen Komishankii ugu horeeyey Somaliland ayaa ku sifeeyay Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare qof xilkas ah oo ku wanaagsan hawl kasta oo la galayo isla markaana daacad ah kana soo dhalaasha waajibaadka loo xil saaro .
Shukri Xaaji Ismaaciil (Baandare) oo Munaasibadaasi ka hadashay ayaa ka warantay halgankii ay u soo martay wax qabadada ay ku mutaysatay abaal marinta la siiyey iyadoo si aada ugu mahad naqday cid kasta oo ku dhiiri galisay kuna garab gashay waxyaabihii ay qabatay.
Waxa kale oo ay ka warantay dhacdooyin lama ilaabaanka ahaa ee soo maray intii ay ku jirtay hawlaha samo-falka ah ee ay waday sida waqtiyadii ay ka socdeen dalka dagaaladii sokeeye iyo waxqabadyadii u hirgalay Mudadii ay ku Xubinta ka ahayd komishankii ugu horeeyey Somliland, iyadoo geesta kalena xustay qiimaha ay nabadu guud ahaan u leedahay nolosha Aadmaha.
Marwada Madaxweynaha Somaliland marwo Aamina Waris Sheekh Maxamed Jirde oo soo gabo-gabaysay xafladaasi ayaa ka mara-kacday inay Shukri Baandare tahay qof dadka dhex-diisa amaan balaadhan ku dhex leh iyadoo ka sheekaysay taakulada iyo wax qabadka ay mar walba la garab taagan tahay bulshada dhiban gaar ahaana wakhtiyadii ay dagaaladu dalka ka socteen.
Marwo Aamina Waris waxay kula dardaarantay in aanay ka daalin dadaalkeeda iyo waxa qabadka ay faraha badan ee ay gacanta ku hayso.Gabagabadii waxay Marwadda koowaad Guddoonsiisay Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare Abaal Marin ay ugu tallo gashay in ay ku Maamuusto.
Previous PostBoorame: Dadweyne waddo 1-km ah iskaa wax u qabso ku dhisanaya markii ay ka quusteen D/HooseNext PostRoobkii Gu’ga oo caawa ka curtay deegaamo ka tirsan Awdal iyo Gabiley	Blog